जापानको त्यो समृद्धि सूत्र::Online News Portal from State No. 4
जापानको त्यो समृद्धि सूत्र
डेढ शताब्दीअघि अर्थात वि.सं. १९२५ मा नेपालमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको निधन भएको वर्ष जापानमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो। तत्कालीन जापानी सम्राट मुत्सुहितोले आधुनिक शासन व्यवस्थाको घोषणा गरे। जसले सात शताब्दीदेखि जापानमा रहेको सामान्ती व्यवस्थाको अन्त्य र आधुनिक जापान निर्माणको ढोका खोल्यो। मुत्सुहितोले १८६८ अक्टोबर २३ का दिन मेइजी (ज्ञानोदय)को शासन शुरु भएको घोषणा गरेका थिए। नेपालमा फागुन ७ लाई जसरी सामान्ती युग समाप्ती भएर आधुनिक शासनको युग प्रारम्भ भएको मानिन्छ। जापानमा पनि ‘मेइजी रिस्टोरेसन’ एउटा त्यस्तै परिवर्तन हो।
‘राणा शासनको अन्त्य भएर हामी जसरी आधुनिक शासन व्यवस्थमा प्रवेश ग¥यौं। जापानमा मेइजी रिस्टोरेसनले त्यही हो। त्यसपछि आधुनिक र विकसित जापान निर्माणको थालनी भएको हो’ जापानमा राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पूर्व परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई भन्छन्, ‘जापानी परम्परा र पश्चिमा प्रणालीको फ्युजन नै मेइजीले अघि सारेका थिए। त्यसैको आधारमा अहिलेको समृद्धि हालिस भएको हो। जापानले अहिले पनि त्यसलाई पछ्याइरहेको छ।’ चीनको तीव्र विकासले उछिन्नु अघि २०१० सम्ममा जापान विश्वको दास्रो ठूलो अर्थतन्त्र थियो। विश्वका धेरै सहयोग गर्ने र ऋण दिनेको सूचीमा समेत शीर्ष स्थानमा रहेको जापान एशियाका थोरै विकासित देश मध्येमा पर्दछ।
‘मेइजी क्रान्तिपछि राजनीतिक व्यवस्था मात्रै नभएर सबै विषयलाई आधुनिक रुपमा सञ्चालन गर्न थालियो। त्यसले जापानालाई विश्वशक्तिको रुपमा स्थापित ग¥यो,’ उच्च शिक्षा जापानमा अध्ययन गरेका पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य भन्छन्, ‘शासनमा मात्रै नभएर देश विकासमा लागि आवश्यक पर्ने सबै विषयमा मिहिन ढ्रंगले अध्ययन गरेर काम गरेको देखिन्छ। त्यसकै जगमा अहिले पनि जापान उभिएको छ।’
मेइजी शासनकालमा जापानले जसरी आफूलाई सबै क्षेत्रमा विकास गरेर लग्यो त्यसलाई हालसम्म अन्य कुनै देशले पछ्यान नसकेको विश्व अर्थ मामिलासम्बन्धी म्यागेजिन द इकोनोस्टले लेखेको छ। ‘चीनले अहिले गर्दै आएको प्रगतिले पनि त्यसकालको विकासलाई भेट्टाउन सकेको छैन। त्यसैका आधारमा जापान संसारमा शक्तिको रुपमा स्थापित छ’ सन् २०१८ को फेब्रुअरी अंकमा म्यागेजिनले लेखेको छ। सन् १८६८ जनवरीमा केही युवा समुराइ र उनीहरुका केही व्यापारी समर्थकले जापानको तोकुगावा सगुनेटविरुद्ध विद्रोह शुरु गरे। विद्रोहीहरुले क्योदोमा रहेका सम्राटलाई इदो पु¥याए। साम्राट मुत्सुहितोले त्यहीँबाट सात शताब्दी लामो सामान्ती व्यवस्थाको अन्त्य भएको घोषणा गरे। त्योसँगै जापानमा तीव्र गतिमा औद्योगिकीकरण र आधुनिकिकरण सुरु भयो। इदो आजको जापानको राजधानी टोकियोको नाम हो।
केही व्यापारीको साथ लिएर त्यतिबेला कुलिन तोकुगावा सगुनेट समूहले जापानमा वास्तविक शासन गरिरहँदा सो विद्रोह भएको थियो। त्यतिबेला सम्म जापानको स्थिति नेपालमा राजालाई गद्दीमा राखेर राणाहरुले शासन चालएजस्तै थियो। तर उनीहरुले संसारलाई आश्चर्य लाग्ने एउटा विषय प्रमाणित गरे जसले अहिलेसम्म विश्वलाई अचम्ति पारिरहेछः आफ्नो परम्परालाई कायम राख्दै आधुनिकता र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न सकिन्छ।
हतियार देखाएर अमेरिकाको व्यापार प्रस्ताव
सन् १९५३ मा युद्धपोतसहित आएका अमेरिकीले जापानमा आफूले व्यापार गर्न पाउनु पर्ने माग राखे। दुई शताब्दीदेखि जापान बाह्य विश्वका लागि बन्द भएको बेला अमेरिकी प्रस्ताव आएको थियो। त्यसअघिसम्म डचहरुसँग मात्र जापानको व्यापार थियो। उनीहरु पनि मुख्य भूभागमा प्रवेश गर्न पाउँदैनथे। इदो नजिकै एउटा टापुमा व्यापार हुन्थ्यो। युद्धपोतसहित आएका पश्चिमा दबाब सामु ताकुगावा सगुनेट समूह झुकेको थियो। यो कुरा युवा समुराईलाई मन परेको थिएन। त्यसको विरोध गर्दै उनीहरुले तोकुगावा सगुनेटलाई सत्ताच्युत गर्ने योजना बनाए। उनीहरुले ‘सम्राटका सम्मान, बार्बरियनको अन्त्य’ भन्दै अभियान थाले।
शुरुमा उनीहरुले परम्पराको नाम दिए। क्योटोमा सामान्य जीवन बिताउँदै आएका सम्राटलाई राजनीतिको मुलधारमा ल्याए त्यति बेला उनको उमेर १२ वर्षको थियो। उनले १९६८ अक्टोबर २३ मा मेइजी युगको शुरुवात भएको घोषणा गरे। जापानमा प्रत्येक सम्राटका शासनलाई छुट्टाछुट्टै नाम दिएर शासन व्यवस्थामा गणना हुन्छ। यतिबेला जापानमा मुत्सुहितोका पनाति सम्राट अकिहितोको शासन छ। उनलाई सम्राट ‘ताइसो’ भनेर भनिन्छ। जापानमा सम्राटको वास्तविक नामलाई उच्चरण गर्नुलाई शोभनीय मानिँदैन।
सम्वृद्धि सूत्रकाे खाेजीमा २२ जना युरोप र अमेरिका
‘एशियाली देशमा संविधानवाद भित्र्याउने देश जापान हो। युरोपेली देशहरुले साम्राज्य नभएको र आफ्नो स्वतन्त्रतालाई कायम राख्दै उनीहरुले आधुनिक देशको रुपमा विकास गरे,’ जापानकै अध्ययन गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका संयोजक खड्ग केसी भन्छन्, ‘कुनैको साम्राज्यभित्र नभएर स्वतन्त्र हैसियतमा विकास गरेका हुन्।’
यसका लागि जापानले पचास जना अधिकारीहरुलाई अमेरिका र युरोपले प्रशासन, व्यापार, उद्योग तथा सैनिक मामिलामा अध्ययन गर्न पठाएको थियो। उनीहरुले २२ महिनामासम्म ती देशहरुको पूर्वाधार विकास र व्यवस्थाहरुको अध्ययन गरे। जापान फर्किएपछि उनीहरुले युरोप र अमेरिका लागू भएका विकास पूर्वाधारको जापानी परिप्रेक्ष्यमा कार्यान्वयनको सिफारिश गरे। रेल तथा सडकहरु निर्माण भए, भूमिसुधार अघि सारे। सामान्तहरुको जग्गा पुनःवितरण गरे, पश्चिमा प्रणालीको शिक्षा लिए, आधुनिक सैनिक निर्माण गरे। सन् १८८९ मा मिजी संविधान जारी भयो। त्यो प्रुसिया (हालको जर्मनी)को जस्तो थियो। त्यसमा सरकारको प्रतिनिधित्व र साम्राटको सम्मानलाई सुनिश्चित गरिएको थियो।
‘शुरुमा जापानीहरुले रेल देखेका थिएनन्। विकासका लागि रेललाई अघि सारे। त्यस समयमा बेलायती बैंकबाट १२ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिइएको थियो। तर पहिलो परियोजनालाई प्रविधि सिक्नका लागि प्रयोग गरे,’ आचार्य भन्छन्, ‘त्यसपछि विस्तारै–विस्तारै आफैँले बनाउँदै गएका हुन्।’ सन् १८९५ मा जापानले पूर्वी एशियाको परम्परागत शक्ति चीनलाई पराजित गर्यो। छोटो युद्धमै कोरियामाथि जीत हासिल ग¥यो। सन् १९०४ देखि १९०५ सम्म रुस–जापान युद्धमा जापान विजयी भयो। शुरुमा पश्चिमा शक्तिहरुले आफ्नो स्वतन्त्रता समाप्त पारिदिन्छन् कि भनेर त्रसित रहने जापान एशियाको एउटा सशक्त शक्तिशाली मुलुक बन्न सफल भयो।
मेइजी सुधारवादीहरुले निर्माण र सैनिकीकरण गरेको जापानले सन् १९३७ मा पूर्ण युद्धमा गयो। कति भने दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा दक्षिण पूर्वी एशियाका अधिकांश स्थान जित्दै जापान बर्मासम्म आइपुगेको थियो। जापानीलाई त्यो युद्धमा रोक्न गोर्खा सैनिकले बेलायतीको तर्फबाट लडेका थिए। जापानको सैनिक महत्वकांक्षाले एउटा विध्वंशको बाटोमा पुग्यो। जुन अहिले पनि छिमेकी देशहरुसँगका सम्बन्धमा बिगार्ने प्रमुख कारण बन्ने गरेको छ।